Cream Hydrating မှအကောင်းဆုံး Cream Hydrating မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. အကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ဖို့အပ်နှံသည် Cream Hydrating in Taiwan။ ထိုထုတ်ကုန်အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးပြည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာကြသည်ကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအကောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့သဘောပေါက်နားလည်ကြပြီးရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
VSK တဆေး Hydrating Cream
အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းနှင့်ဆီပြန်ဖြည့်ခြင်းတို့သည်လှပသောအသားအရေရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်;အရေပြား elasticity ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူး.
မြေပဲ ၂-၃ မှ ၃ ခုကိုယူပြီးမျက်နှာနှင့်လည်ပင်းကိုနှိပ်ပြီးစုပ်ယူရန်လက်ချောင်းများဖြင့်မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းကိုအညီအမျှပြုလုပ်ပါ။.
အမျိုးအစားအားဖြည့်:အရေပြားအလွန်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ရေငတ်သောအခါ,လျှောက်လွှာစုပ်ယူပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့,သင်သည်လျှောက်လွှာကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/hydrating-cream.html
အကောင်းဆုံး Cream Hydrating ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် Cream Hydrating ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
VSK တဆေး Micro Micro Essence အထူးတောက်ပသောခံစားမှုသည်ဆိတ်၏အထူးအခံမှဖြစ်သည်’s နို့ကိုတဆေးနှင့်ဖြစ်စဉ်၏ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်တောက်ပခံစားမှု,အရေပြားအစိုဓာတ်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်,နှင့်တောက်ပ restore နှင့်အတွင်းပိုင်းကနေထွန်းလင်း.Maintenance အာရုံစူးစိုက်ပုလင်းတစ်လုံးသည် lotion နှင့်အဟာရတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုပေါင်းစပ်သည်,နှစ်ဆ-တစ်ခုမှာအကျိုးသက်ရောက်မှု,ချက်ချင်းဖြည့်ပါMaintenance ရည်ရွယ်ချက်အသားအရေကိုလျင်မြန်စွာစိုစွတ်အောင်စိုစွတ်အောင်လုပ်ပါ,အရေပြားအစိုဓာတ်ကိုတိုးမြှင့်,အရေပြားပျော့ပျောင်းစောင့်ရှောက်လော့,မှိုင်းအရေပြားမှနှုတ်ဆက်ပါ,နှင့်တောက်ပတင်ပြ,တောက်ပအသားအရေ.ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ အထွေထွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု:အရေပြားကိုသန့်စင်ပြီးနောက်,သင့်လျော်သော VSK တဆေး Micron Water Essence ပမာဏကိုယူပါ,မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းပေါ်တွင်လိမ်းပြီးစုပ်ယူမှုအတွက်ပြုလုပ်ပါ. အရေပြားအလွန်ခြောက်သွေ့တဲ့အခါ:VSK တဆေးများကိုစိုစွတ်စေရန်ချည်မျှင်ဖြင့်သုံးပါ။ မိခင်မိုက်ကရိုရေအရေအတွက်ကို ၁၀ ရက်ခန့်လိမ်းပါ-15 မိနစ်. စွမ်းရည်:100ml/ပုလင်းမူလ:ထိုင်ဝမ်
VSK တဆေးပျားရည် မှိုင်းတိုးတက်စေသည်;အသားအရေကိုထိန်းညှိပေးသည်,အသားအရေဆီကိုထိန်းညှိပေးသည်,အိုမင်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်,နှင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းထားသည်’အသားအရေနူးညံ့ချောမွေ့စေခြင်း.Maintenance အာရုံစူးစိုက်အထူး milky မျက်နှာဖုံးသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပြည့်စုံသည်.နို့ရေချိုးခံစားပြီးနောက်,၎င်းသည် elastic ဖြစ်သောအံ့သြဖွယ်ထိတွေ့မှုရှိသည်,နူးညံ့သိမ်မွေ့,တောက်ပ,စေးနှင့်ချောမွေ့. Maintenance ရည်ရွယ်ချက်အရေပြားဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပြီးအသားအရေတင်းကျပ်စွာပြုလုပ်ပါ.အရေပြားဆီကိုထိန်းညှိပေးပါ,ချောမွေ့သောအပေါက်,အဖြူရောင်အသားအရေ,ချောချောမွေ့မွေ့,နှင့်အရေပြားကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်.ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ ထူထဲသောချုံ့နည်းလမ်း:၁၀ ကြိမ် နှိပ်၍ ၁၅ မျက်နှာလုံးလုံးထူသောအလွှာကိုသုံးပါ-မိနစ် ၃၀.အရေပြားခိုင်မာတဲ့ခံစားရတဲ့အခါ,ရေနှင့်ဆေးပါ. ရောစပ်နည်းလမ်း:သင်၏လက်ဖဝါးပေါ် ၃ ကြိမ်နှိပ်ပါ,ထို့နောက် VSK တဆေး Micron Water Essence ၏ ၃ ချပ်ကိုထည့်ပါ,နှစ်ခုကိုသင်၏လက်ချောင်းထိပ်များနှင့်အညီအမျှရောစပ်ပါ,မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုအဝတ်လျှော်ခြင်းမရှိဘဲလိမ်းပါ.၃.အိပ်ရာမဝင်မှီညအချိန်တွင်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ,ဝက်ခြံပေါ်ရှိပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိပုတ်ပါ,နှင့်ဝက်ခြံtheရိယာ၏အရွယ်အစားတစ်ဝါဂွမ်း pad ပါအတူဖုံးလွှမ်းထားသည်.နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးကြောပြီးသင်အံ့သြဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်. စွမ်းရည်:50ml/ပုလင်းမူလ:ထိုင်ဝမ်
MONIFACE ANTI-အရေခွံအိုမင်းနေခြင်း မိုက်ခရို-မော်လီကျူး,ဖြေးဖြေးအိုမင်းခြင်းနှင့်အဖြူရောင်,တကယ်ထိရောက်အထူးတရုတ်ငါးခုဒြပ်စင်စာရွက်မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သီးသန့်ပုံသေနည်းအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:Ganoderma lucidum,hyaluronic အက်ဆစ်,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,ပိုးစာအခေါက်,Baishouwu,မွေးနေ့,glycerinထိရောက်မှု:မှိုင်းတိုးတက်စေ,အဖြူရောင်အသားအရေ,အရေပြားအိုမင်းခြင်း,အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုသက်သာစေသည်,အရေပြားဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်,အရေပြားကိုပြုပြင်ပါ,epidermal ကာကွယ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေ,အစိုဓာတ်,ကြားနေနှင့်မ-နာကျင်စေတယ်,မတည့်အရေပြားအတွက်သင့်လျော်သောဘေးကင်းရေး:မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroids အခမဲ့ဖြစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖောင့်အရွယ်အစား:05000256တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုအမှတ်.I660119 တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်.M556284စွမ်းရည်:30ml